🥇 ▷ Xiaomi Mi Band 4 been ah: sida loo aqoonsado kuwii hore ✅
Xiaomi Mi Band 4 been ah: sida loo aqoonsado kuwii hore
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad iibsato Xiaomi Mi Band 4, waxaan kugula talineynaa inaad fiiro gaar ah yeelatid. Nasiib darrose, guriga cusub ee smartka ee Aasiya wuxuu la kulmaa waqti xun marka loo eego ganacsiga “iskuxirka”. Waxaa jira warbixino fara badan oo adeegsadayaasha iibsaday, xitaa kuwa ka yimid meelo aad loogu kalsoon yahay sida amazon, oo ay heleen been abuur. Taasi waa sababta aan u rabno inaan kuu sharraxno sida loo aqoonsado been abuur Xiaomi Mi Band 4 oo mid asal ah ka yimid.
“Redmi TV wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya Shiinaha” Xiaomi ayaa faafin doonta
Digniinta been-abuurka ah: iska jir inaad iibsatid Xiaomi Mi Band 4
Sida laga yaabo inaad hore u soo aragtay, Xiaomi Mi Band 4 waa iib toos ah oo laga keenay Amazon Talyaani qiime ahaan € 34.99. Si kastaba ha noqotee, haddii aad booqato bogga adigoo gujinaya calaamadda hoose, waad arki kartaa sida ay tiradu u sarreyso faallooyinka xun. In kasta oo ay tahay badeecad si rasmi ah looga iibiyay Talyaaniga oo ay ku jirtay bandhigyo ixtiraam leh, uma muuqato in isticmaaleyaashu si wanaagsan u soo dhaweynayaan.
Tani waa sababta kor ku xusan: inbadan baa iibsaday laakiin waxay heleen nooc been abuur ah oo loo yaqaan ‘Xiaomi smartband’. Hoos waxaan ka soo aruurinay xog kooban oo kooban laakiin waa mid muhiim ah, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inay jiraan waxyaabo badan oo intaa ka badan. Kaliya taas arag 44% dib u eegista Amazon waxay leeyihiin 1 xiddig sida qiimeynta.
Jahwareerka oo dhan waa “dambi” Amazon
Xaqiiqdii, adoo gujinaya calaamadda kor ku xusan, waxaa laguu wareejin doonaa nooca asalka ah ee Xiaomi Mi Band 4. Si aad u fahanto, kaliya fiiri qoraalka “Iibay oo soo raray Amazon“Qaanso Iibsashada” badhanka
Sida laga yaabo inaad horeyba ula socoto alaabo kale, Amazon waa caadi inaad aruuriso dhamaan xayeysiisyada iibka iyadoo lagu xayeysiinayo hal xayeysiin, si aysan u dhimin kala-goyntooda. Si kastaba ha noqotee, tani waxay abuurtaa xoogaa jahwareer ah kiisaska sidan oo kale ah, halkaas oo dib-u-eegisyada liisaska taban lagu daro kuwa asliga ah.
Farqiga udhaxeeya asalka iyo beenta Xiaomi Mi Band 4
Nasiib wanaag, kala duwanaanshaha ayaa si aad ah uga sii cad cad marka loo eego badeecadihii hore oo ay ka jiraan alaabooyin khiyaano badan. Ugu horreyntii, sanduuqa waa isku mid laakiin ma aha isku mid, isla markiiba wuxuu muujinayaa inaad ku hor taal badeecada “tarot”. Sanduuqa asalka ah waxa ku jira indho cad oo ah Astaanta Xiaomi, marka lagu daro lambarka “4”. Dhinaca been abuurka ah, si kastaba ha noqotee, ma jiro astaan ​​shirkadeed, oo lagu beddelay ereyga “Smart Bracelet” iyo “Wada-hawlgalayaal Si Loogu Koryeelo Caafimaadkaaga”. Intaa waxaa sii dheer, qaybta hoose halkii 4aad waxaa loo qoray “M4”, inkasta oo ay la mid tahay (ama ku dhawaad) udgoon ay isticmaalaan Xiaomi.
Xitaa smartband laftiisu aad ayey u kala duwan tahay, in kasta oo si xeeladeysan loo adeegsado. Ugu horreyntii, qaabka kaabsalku wuu yara yara duwan yahay, in kasta oo loo baahan yahay in loo dhawaado si loo garto. Laakiin u rogo iyaga si cad ayaad u arki kartaa midda been abuurka ah ee labada, maaddaama muuqaalkaas uu yahay bilaa caddayn CE iyo Mi. Iyadoo aan tixgelin la siinin qalabka garaaca wadnaha ee si kala duwan loo meeleeyay
Halka laga iibsado asalka ‘Xiaomi Mi Band 4’
Sida dhammaan alaabada si rasmi ah looga heli karo Talyaaniga, tixraaca ugu weyn ayaa ah tan Xiaomi Italia lafteeda. Labadoodaba gudaha Dukaamadayda jir ahaaneed ku kala firdhay Talyaaniga in Kaydinta qadka internetka waxaad ka heli kartaa iyada oo lagu iibinayo qiimaha € 34.99. Smartband sidoo kale waxaa lagu iibiyaa dukaamada Unieuro iyo MediaWorld.
Haddii kale, waad ku kalsoonaan kartaa Amazon, kaas oo aad had iyo jeer ka heli karto asalka ah qiime dhan 34.99 €. Adigoo gujinaya calaamaddaada hoose waxaa laguugu wareejin doonaa badeecada asalka ah, xitaa hadii intaadan gunaanadin hubinta iibsashada inay jirto ereyga “Iibay oo soo raray Amazon“Markaad sidaa sameysid, xitaa haddii wax qaldamaan, waad ka faa’ideysan kartaa adeegga soo celinta had iyo jeer lagu kalsoonaan karo ee Amazon.
Kala hadal qodobka anaga iyo Xiaomi koox ahaan Telegram waa Facebook Balanqaaday!